Chrome yatove neRSS mutengi, shanduko muUmushandisi-Mumiriri uye maneja wepassword | Linux Vakapindwa muropa
Chrome yatove neRSS mutengi, shanduko muUmushandisi-Mumiriri uye maneja wephaswedi
Google ichangoburitsa akati wandei shanduko ayo akaunzwa semabasa ekuyedza mukati meiyo «Canary» bazi, rimwe remabasa matsva iyo inosanganisirwa ndeyekuyedza yekutevera kune Chrome ne yakavakirwa-mukati RSS mutengi.
Vashandisi Iwe unogona kunyorera kune RSS feeds kubva kune saiti dzekufarira kuburikidza ne "Tevera" bhatani mune menyu uye tarisa kutaridzika kwemaposita matsva muChikamu chinotevera pane peji kuvhura iyo nyowani tebhu. Kuedzwa kwechinhu chitsva kuchatanga mumavhiki anotevera uye ichaganhurirwa kusarudza US Chrome yevanoshandisa Android.
Imwe yeshanduko iri kubatanidzwa muChannel ndeye kudzima zviri mukati meiyo HTTP Mushandisi-Mumiriri musoro, sezvo Google yainge yamboburitsa marongero echiito chakadai, asi nekuda kwedenda reCovid-19, shanduko idzi hadzina kuitwa.
Mu Chrome 89, iyo YeMushandisi-Agent Client Hints michina yakagoneswa nekutadza, iri kuvandudzwa seinotsiva Mushandisi-Mumiriri, uye ikozvino Google inotarisira kuenderera mberi kuyedza yekucheka mashandiro inosangana neMushandisi-Mumiriri. Mushandisi-Mumiririri Kasitoma Hints iyo inobvumidza kuronga yekusarudzika kuendesa kwedata pane akasarudzika ma parameter ebrowser uye iyo system (vhezheni, chikuva, nezvimwewo) chete mushure mekukumbira kubva kuseva. Mushandisi, zvakare, anogona kuona kuti ndeapi ruzivo anogona kupihwa kune varidzi vesaiti.
Paunenge uchishandisa Mushandisi-Mumiriri Client Hints, chinongedzo hachipfuudzirwe nekumira pasina chikumbiro chakajeka, asi chete ma parameter ekutanga anoratidzwa nekumisikidza, izvo zvinoita kuti kungoziva kwekungoita kuome.
Kusvika iko kutamira kuClient Hints kwapera, Google haina chinangwa chekushandura mushandisi-mumiririri maitiro kune akasununguka kuburitswa.
Mushure mekuchenesa, zvinokwanisika kuti uzive muMushandisi-Mumiriri mutsara zita rebrowser, rakakosha vhezheni yebrowser, chikuva uye mhando yechigadzirwa (nhare mbozha, PC, piritsi). Zvekuwedzera dhata, iwe unozofanirwa kushandisa iyo Mushandisi Agent Client Kuraira API.
Kune nhanho nomwe dzekufamba zvishoma mushandisi-Mumiririri yekucheka:
Mu Chrome 92, iyo DevTools Nyaya dzenyaya tanga ichatanga kuratidza yambiro dzechinyakare.
MuKutanga bvunzo modhi, masaiti achave nemukana wekugonesa truncated Mushandisi-Mumiriri kuendesa modhi. Kuyedzwa mune iyi modhi kunogara kweinenge mwedzi mitanhatu.
Masayiti akakundikana kuenda kuAPI Client Hints anowana muyedzo wekutanga mabviro, achivabvumidza kudzosa maitiro ekare mukati memwedzi mitanhatu.
Iyo Chrome vhezheni nhamba muMushandisi-Mumiriri ichave yakapfupikiswa mune fomati MINOR.BUILD.PATCH
Ruzivo rwevhezheni ruchaderedzwa muvigator.userAgent, navigator.appVersion, uye navigator.platform desktop APIs.
Ruzivo rwekuchinjisa kubva kune mobile chikuva kuenda kuChannel yeApple ichadzikiswa (Android vhezheni uye chishandiso modhi kodhi zita parizvino rinotamiswa)
Reverse Chekutanga kutongwa kwekutsigirwa kuchamiswa uye kungopfupiswa mushandisi mushandisi ndiye achazopihwa pamapeji ese.
Pakupedzisira, isu tinogona zvakare kuwana mu Chrome ari inoronga kuita mune password password Chrome yakavakirwa-mukati basa rekugadzirisa shanduko yemaphasiwedi kana password yakadzvanywa ikaonekwa.
Kunyanya, kana panguva yekusimbisa zvikazoitika kuti iyo account yakanganiswa nekuda kwekudonhedza kweiyo saiti password password, mushandisi anozopihwa bhatani kuti akurumidze kuchinja password pane ino saiti.
Kune nzvimbo dzakatsigirwa, iyo password yekuchinja maitiro ichaitwa otomatiki: bhurawuza rinozadza uye kuendesa mafomu anodikanwa ari ega. Nhanho imwe neimwe yeshanduko yeshanduro inoratidzwa kune mushandisi, uyo anogona kupindira chero nguva uye switch kune echinyorwa modhi.
Kugadzirisa kudyidzana pamwe nemafomu ekushandura password pane akasiyana masayiti, iyo Duplex muchina wekudzidza muchina unoshandiswa, uyo unoshandiswa zvakare muGoogle Mubatsiri. Iyo nyowani ficha ichaumbururwa zvishoma nezvishoma kune vashandisi kutanga neChannel yeApple muUS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome yatove neRSS mutengi, shanduko muUmushandisi-Mumiriri uye maneja wephaswedi
Red Hat Enterprise Linux 8.4 yakatoburitswa kare